ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ဇာတ်ကောင်ဣသရေလအ | Apg29
ယခုငါတို့မရှိတော့ကြောင့်နှစ်ပေါင်း 70 အကြာတစ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ယုဒလူတို့ကသူတို့တိုင်းပြည်ပြန်လာကြလိမ့်မည်ဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤနားမလည်ကြဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုကျနော်တို့ကပရောဖက်ပြုစကားလုံးများ၏နားလည်မှုအတွက်ပယ်ချမည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာသိသိသာသာအသံစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကဒီလမ်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို။ ဒါဟာယခုနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း 70 ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုတင်အတွက်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များကိုဖတ်တဲ့သူတွေကိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသဘောပေါက်ပြီပရောဖက်ပြုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 1600 ခုနှစ်, အင်္ဂလိပ်ဘုရားကျောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဘာသာရေးပညာရှင်သူဆရာယောဟနျ Owen, အသက်ရှင်။ , ထိုကာလမဟုတ်ယုဒလူတို့ကသူတို့တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာနိုင်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်အနည်းငယ်မှာရှိခဲ့သည်။ ဒီနေသော်လည်းဟောကိန်းထုတ် ယောဟနျသ Owen အောက်ပါအတိုင်း:
အဆိုပါပရိုစာရေးဆရာ ရှင်ပေါလု Glegenhauver 1655 ၌ဤ wrote: "သူတို့ပြည်ယုဒလူတို့ကိုတစ်ဦးကအမြဲတမ်းပြန်လာထာဝစဉ်ကိုအာဗြဟံ, ဣဇာက်နဲ့ယာကုပ်ဖို့န့်အသတ်ကတိတော်များအားဖွငျ့ဘုရားသခငျအားဖြင့်သူတို့ကိုတာဝန်ပေးသည်။ "
ကျနော်တို့ကအနှစ်တရာဝန်းကျင်ကနေတချို့ဥပမာယူပါလိမ့်မယ်။ သြဂုတ်လ Hedstrom သူ့စာအုပ်ထုတ်ဝေ 1912 ခုနှစ်ပေး၏ ပရောဖက်ပြုလေ့လာစရာများ။
အထဲတွင်သူကရေးသားခဲ့သည်: "နောက်ဆုံးတော့ UTI တူရကီအင်ပါယာအဲဒီအခြိနျမှာလွတ်လပ်သောအခမဲ့ပြည်နယ်, အမည်ရဂျူးပြည်နယ်, အဘယ်ကြောင့်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတိထားမိ။ "
ဒိနျးမတျဝန်ကြီး C. Skovgaard-Petersen စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည် လက္ခဏာများနှင့်ကြိမ်, က 1919th ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ဤစာအုပ်ထဲတွင်စာရေးသူသညျယရှေုပြန်မရောက်မီမှစကားရပ်ပေးသည်, ဒါကြောင့်ယုဒလူတို့နောက်ကျောကသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်ဤ wrote:
"ဒါပေမဲ့မဆိုအမှု၌ဣသရေလလူတို့သည်မိမိတို့နိုင်ငံတွင်စုဝေးစေနှင့်သခင်ကြွလာတော်ရှေ့မှာဝိညာဏvårbrytning၌ရှိကြ၏ကြောင်း, ကျမ်းစာအမှန်တရားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကောင်မပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်, ယုဒလူတို့သေးပါလက်စတိုင်း၏အပိုင်သို့မလာကြပြီ။ "
ထို့အပွငျ Skovgaard-Petersen wrote: "ကျနော်တို့ထို့ကြောင့်ယုဒလူတို့သညျယရှေုခရစျ၏ပြန်လာမတိုင်မီဖြစ်နှင့်သူ၏တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ "
ဒီအခြေခံပရောဖက်ပြုသောအခြေအနေများမပြည့်စုံပြီဖြစ်သောကြောင့်အဘယျသို့ယခုသို့သော်ပိုမိုနီးကပ်စွာလာသေး၏, ယရှေုသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း၏အကျိုးဆက်များကိုယူသလား?
Vecka 9, söndag7mars 2021 kl. 20:00